Ahoana no nahazoana rohy mankany amin'ny tranokalanao?
Andao hiatrika izany - manomboka mamorona rindran-damba mankany amin'ny tranokalanareo dia fihenana mafy. Tsy asa mora izany, fa raha vonona sy vonona ny hiasa hatrany ianao - azo tratrarina izany. Aleo asehoko anao ny sasany amin'ireo fomba mahomby indrindra hananganana backlinks amin'ny tranokalanao. Andeha hojerentsika ny tranokalako vaovao vao haingana. Mba hikirakira azy eo amin'ilay sehatra dia tsy maintsy manao dingana tsotra aho, toy ny fametrahana fotoana fohy amin'ny fanomezana sarobidy ho an'ny mpihaino ahy, mitsikilo ireo mpifaninana amin'ny tombotsoako manokana, ary miasa amin'ny rohy forum (eny, afaka mitondra tena tombam-bidy). Eto ambany eto ny fifanakalozan-kevitra fohy momba ny safidy mety rehetra.
Manome fanomezana sarobidy ho an'ny mpihaino anao
Voalohany indrindra, aza misalasala ny mampiasa fotoana sy ezaka amin'ny fanomezana fanomezana sasantsasany ho an'ny mpihaino anao. Midika izany fa rehefa tonga amin'ny famerenana ny backlinks voalohany amin'ny tranonkalanao ianao, dia zavatra iray sarotra ihany matetika no atrehin'ny tetikasa vaovao rehetra ao anaty aterineto - tsy misy olona mahafantatra azy ireo ao amin'ny tranonkala. Noho izany, mila manolotra zavatra tena mahasoa ho an'ny olona ianao amin'ny fametrahana ny fizotry ny fitsidihana, ny famandrihana, ny fizarana ary ny fitarihana. Anisan'ny fomba tsara indrindra hamitana ity asa ity ireto manaraka ireto: mamorona sary mihetsika mifanaraka amin'ny foto-kevitrao, mikirakira fikarohana na fanadihadiana momba ny angona tahiry (e. h. , lahatsoratra bilaogy mahasoa, toro-làlana, toro-làlana, mpampianatra, sns. ) Raha ampy fahaizana ianao, dia azonao atao koa ny miezaka mamorona fitaovana maimaim-poana an-tserasera mba hahazoana maimaimpoana maimaim-poana ny tranokala, ary koa ny backlinks momba ny varotra organiques ho an'ny tranonkalanao.
Ny mpitsoka amin'ny fifaninanana ho an'ny tombontsoanao
Toa mety ho tsara ny mianatra ireo mpifaninana mahomby kokoa hahalalanao ny zava-bitany sy ny ratsy indrindra. Raha ny marina, iza no nilaza fa tokony hitsangatsangana ny mpitsikilo ny mpanohitra ambony ao amin'ny lasibatra? Noho izany dia aza misalasala manangona backlinks fanampiny amin'ny tranokalanao miaraka amin'ireto hetsika tsotra ireto: mikaroka ireo mpanohitra akaiky anao, mamantatra ny fiverenany tsara indrindra, ary manandrana manavao ireo izay vao haingana indrindra. Ho fanatanterahana ny asa, dia manoro hevitra aho amin'ny fampiasana fitaovana fanodinam-bokatra toy ny Majestic, Ahrefs, Semalt Analyzer na ireo rafitra hafa maimaim-poana - na izany aza, dia ny anao ihany no manapa-kevitra.
Work on Forum Links
Fantatrao ve fa ny fifandraisana forum dia tsy vitan'ny hoe MANANA tombony ihany? Mazava ho azy fa omena isika fa hampiasa azy ireny. Alohan'ny zavatra hafa, avelao hiatrika izany - ny ankamaroany, ny sonia, ny mombamomba azy, ary ny sisa amin'ireo rohy fandefasana standard dia tsy mety hisy vidiny marina. Ahoana anefa raha miezaka mamadika rindran-damba amin'ny tranokalanao ianao miaraka amin'ireo lohahevitra miresaka indrindra amin'ny forum malaza sy be mpankafy? Midika izany fa afaka misintona rohy mankany amin'ny votoatinao foana ianao - mametraka azy ao amin'ny laharana voalohany izay hanaraka ny sisa amin'ny forum forum. Mazava ho azy, ny tiako holazaina dia tsy hoe fako fotsiny ny rohy fotsiny mba hilazana zavatra toy ny "fitsidihana ny tranonkalako hahazoana vaovao bebe kokoa. "Satria satria ny sehatra tsara rehetra dia tokony hanana lalàna foana mba hahatonga ilay lahatsoratra miasa.
Na izany aza, ny lohahevitra ifanakalozan-kevitra dia tokony ho mendri-piderana sy sarobidy araka izay tratra, mba hahatongavana eo an-tampony sy hanomezana rindran-tsavily ho an'ny tranonkalanao. Farany, tadidio fa ity rohy ity forum ity dia tsy ho ny mahery indrindra, indrindra indrindra amin'ny fomba fijerin'ny SEO. Na izany aza, manana rohy mifampitohy kokoa mavitrika matetika na manampy amin'ny fananganana fototra fototra matanjaka ho an'ny tranonkala iray, indrindra rehefa vaovao izany Source .